School Life ( စ / ဆုံး ) – Grab Love Story
School Life ( စ / ဆုံး )
ဇာတ်လမ်း – မောင်ဇရက်
အပြာစာပေများစုစည်းရာ Blogger မှကူါ်ယူသည်။
“ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ အလှအပဒီလောက်ကြိုက်နေရင် ပညာရေးတော့ထိခိုက်တော့မှာပဲ ” . . .
သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကို တင်ပါးလေးလှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ လျှောက်သွားသော အိအိဖြူ မကြားလိုက်ပါလေ။ ….. မြို့၊ အမှတ် (၃) အထက ကျောင်းကြီးမှာ ၁၀တန်းကျောင်းသူ အိအိဖြူကနာမည်ကြီး။ စာတော်လို့တော့မဟုတ်။ ရုပ်ရည်ရူပကာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိူးအစားမှာ နာမည်ကျော်တာ ဖြစ်သည်။ အသားဖြူဖြူနှာတံပေါ်ပေါ်မေးချွန်ချွန်နဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင် အိအိဖြူကို အလယ်တန်းကတည်း ကြိတ်ကြိုက်နေကြသူတွေ မနည်းမနော်။ အခုအတန်းကြီးလာတော့ ၀င်းပပမျက်နှာလေးတင်မက ဆူဖြိုးထွက်လာတဲ့ ဘော်ဒီကြီးက ကျောင်းသားများစွာကို နှလုံးခုန်သံမြန်စေပါသည်။ အဓိကကတော့ ကျောင်းစိမ်းထမီပျော့ပျော့ကို အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကိုကြိုးရာလေးအမြှောင်းလိုက်ပေါ်တဲ့ထိ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ ၀တ်တတ်တဲ့အိအိဖြူရဲ့ စတိုင်။ခြေလှမ်းလေးတွေကို မျဉ်းဖြောင့်တကြောင်းထဲကျအောင်လျှောက်ရင်း လှုပ်အိလှုပ်အိဖြစ်နေတဲ့ အိုးထွားထွားကြီးတွေက အိအိဖြူရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်လာသည်။ အိအိဖြူကား ကျောင်းသားများအကြား အလှဘုရင်မလေးအဖြစ်ကျော်ကြားကာ ဆရာမများကြား ရွစိတတ်ကျောင်းသူအဖြစ် နာမည်ကြီးလေသည်။ . . . “
အိအိရယ် လှလိုက်တာ ဘယ်သူလုပ်ပေးထားတာလဲ ” . . . လက်သည်းနီရောင်စုံနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ အိအိဖြူရဲ့လက်သည်းလေးတွေကို သူငယ်ချင်း စိမ့် ကအားကျတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ စပ်စုသည်။ ကာလာစုံ ပန်းပွင့်လေးတွေကို လက်သည်း၁၀ချောင်း မထပ်အာင်ဆွဲထားတာမို့ အင်မတန်လှသည်။ ဘာပန်းတွေမှန်းတော့ သေချာခွဲလို့မရ။ . . . “ ဘယ်သူလုပ်ပေးရမှာလဲ စိမ့်ရယ် ငါကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ထားတာပေါ့။ နောက်နေ့ နောက်ပုံစံတွေလုပ်လာအုံးမှာ ” . . . . . . “ တော်လိုက်တာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟင် ” . . . လက်ချောင်းတချောင်းချင်းဆီကို ကိုင်ကြည့်ရင်း စိမ့် ကထပ်မေးပါတယ်။ . . . “ လက်သည်းနီရောင်စုံဘူးသေးတွေ တဗူးမှလေးရာလောက်ပဲရှိတာ။ နေရာတကာမှာဝယ်လို့ရတယ်။ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့တုတ်တံသေးသေးလေးတွေကိုသုံးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ်။ ဟိဟိ ” . . . . . . “ အင်း ” . . . . . . “ အချိန်တော့ပေးရမယ်။ စိတ်လည်းရှည်ရမယ်။ နာရီနဲ့ချီကြာတယ် ။ ” . . . . . . “ အွန် ” . . . စိမ့် စိတ်တော်တော်ပိန်သွားသည်။ ၁၀တန်းကျောင်းသူတယောက် အနေနဲ့လက်သည်းစိုးဖို့ အဲလောက်အချိန်မပေးနိုင်။ . . . “ အိအိရယ်လှတာတော့ လှတာပေါ့။ အဲဒီ့လောက်ကြာနေရင် စာဘယ်အချိန် သွားလုပ်မတုန်း။ ခုကော physics အိမ်စာတွေပြီးပြီလား ” . . . . . . “ အယ် ” . . . အိအိဖြူခေါင်းပူသွားသည်။ ဖင်ကျိန်းသွားသည်။ . . . “ လုပ်ပါအုံး စိမ့် ရယ် ။ ငါမေ့နေတယ် နင်ပြီးပြီမလားဟင် ”၁၀တန်းမှ Physics ဆရာမကြီးဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ကို ကျောင်းသားကျောင်းသူမရွေး တုန်နေအောင်ကြောက်ရသည်။ အသက် ၄၀ခန့် ဆရာမကြီး၊ Physics Dean ဖြစ်သလို အထက (၃) ဒုကျောင်းအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကျောင်းအုပ်အသစ်က့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကိုအရာရာ အားကိုးသည် ။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကသာမက ကျောင်းအုပ်ကပင် သူ့ကို တီချယ်ကြီးဟုတလေးတစားခေါ်ကြရတဲ့ ဆရာမကြီး။ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် စာသင်စာပြကောင်းသကဲ့သို့ စည်းကမ်းပိုင်းကတော့ အင်မတန်တင်းကြပ်သည်။ သူမျက်စိထဲမတွေ့လျှင် ပုံစံမကျလျှင် ပုံစံကျသွားအောင် ဆော်ပလော်တီးချင်သည်မှာ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်၏ စရိုက်ဖြစ်ပါသည်။ သူပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာမလုပ်လာလို့ကတော့ ကျောင်းသားတွေတင်မက ကျောင်းသူတွေကိုပါ အတန်းရှေ့ထွက်ခိုင်းပြီး တင်ပါးကိုကြိမ်လုံးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဗျင်းပါတယ်။ သူ့၂လုံးပြူးကြိမ်စာမိလို့ကတော့ ၁၀တန်းကျောင်းသူမမတွေ စပ်ဖြင်းဖြင်းဒဏ် မခံနိုင်လို့ အရှက်တောင်မငဲ့နိုင်ပဲ အတန်းရှေ့မှာတင် ဖင်ပွတ်ပြီးငိုကြရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘယ်လောက်ဆိုးသောကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ် ဘယ်မျှလောက်နန့်နန့်တက် ဖြစ်နေသော ကျောင်းသူဖြစ်ဖြစ် Physics ချိန်ဆိုလျှင် အမြီးကုတ်ကာ ငြိမ်ကြပါသည်။ . .
. ” ဖူး တော်သေးတာပေါ့ ” . . .
အိအိဖြူ အဆုံးသတ်မျဉ်းပိတ်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ Physics အချိန်မတိုင်မှီမှာတင် စိမ့်ဆီကအိမ်စာကူးတာပြီးသွားလို့ ။ မဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဖူး ။ တီချယ်ကြီးရဲ့ တုတ်စာမိရင် အသားလည်းနာ၊ အရှက်လည်းကွဲ ဖြစ်မှာ။ နှစ်စတုန်းကတောင် အကြောင်းမသိလို့ အိမ်စာအိမ်မှာမလုပ်ခဲ့မိတာ နဲ့တခါခံ လိုက်ရပြီးပြီ။ အဲဒီတုန်းကတည်းက Physics အချိန်ဆို အသက်တောင်ပြင်းပြင်း မရှုရဲဘူး။ မကြောက်ပဲနေနိုင်ရိုးလား လူ၆၀လောက်ရှိတဲ့ အခန်းရှေ့ကစတိတ်စင်လေးပေါ်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီး အိအိဖြူရဲ့ နာမည်ကျော် ဖင်ကြီးတွေကို ကြိမ်လုံးနဲ့ တီးတာ ။ ၃ချက်တိတိ ။ အဲဒီ့တုန်းက အတန်းထဲကအကောင်တွေ သူ့နောက်ပိုင်းကို ဝိုင်းငမ်းနေကြပြီဆိုတာလည်း သိနေတော့ ပိုဆိုးတယ်။ သူက ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ရင်တောင် သက်သက် တင်ပါးလေးလှုပ်ပြီး မျက်လုံးများစွာကို အချောက်တိုက် စွဲဆောင်ရတာကို အရသာတွေ့ပေမယ့် မငယ်တော့တဲ့ ၁၀တန်းအရွယ်ကြီးမှာ အရိုက်ခံဖို့ လှည့်ပေးထားရတဲ့ ကိုယ့်ဖင်ဆုံကြီးကို တပ်မက်စရာအပြင် ရယ်စရာအနေနဲ့ ပါကြည့် နေကြတာ ကိုတော့ မခံချင်ဘူး။ တီချယ်ကြီးလက်သံကလည်းပြောင်သလားမမေးနဲ့။ အဲလောက်ထိနာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်မှန်းထားလို့ ပထမတချက်မှာကတည်းက လန့်ဖျန့်သွားပေမယ် အံကြိတ်ပြီးတင်းခံလိုက်သေးတယ်။ တနေ့ခေါက်ထားတဲ့ စာရွက်ခလေးကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ရဲနိုင် ရှိရာကိုအသာလှည့်ကြည့် လိုက်မိသည် ။ ဟိုဘက်က ရဲနိုင်ကလည်း သူ့ကိုပြုံးပြရင်းမျက်စတွေပစ်ပြနေသည်။ ချစ်သူ၂ဦး မျက်လုံးချင်းစကားပြောတယ် ဆိုတာတော့ကြားဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ် အခုတော့ဟိုကဘာဆိုလိုနေမှန်း အိအိဖြူ သေသေချာချာနားမလည်ပါ ။ ရည်းစားသက်တန်းနုသေးလို့လည်းဖြစ်မည်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ မုန့်စားကျောင်းဆင်းချိန်မှာ အဆောင်ပျက်ကြီးထဲမှာ တွေ့ဖို့ချိန်းတာကို လက်ခံဖို့ စည်းရုံးအသနားခံ တဲ့မျက်ခွက်လုပ်ပြနေတာပဲဖြစ်မယ် ။ . . . “ အိအိရယ် ငါတော့သေချင်တာပဲ ကျောင်းမှာတော့မတွေ့ကြပါနဲ့လားဟယ်။ ” . . . စိမ့် ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ညီးညူသလို သက်ထား ကလည်းအားမပေး။ . . . “ ဟုတ်တယ် အိအိ မတော်လို့ မိသွားရင်သေမှာနော် ၊ ရစရာကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ” . .
. အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ၂ယောက်ရဲ့အားရပါးရ တုံ့ပြန်သံများကြောင့် အိအိဖြူတွန့်ဆုတ်သွားမည်လော။ ဝေးပါသေးသည် ။ အိအိဖြူစိတ်က သိပ်ကြီးတာ . . . ဟင်း . . . ဘူးဆိုဖရုံမသီးဘူး။ သွားမယ်ဆိုသွားမယ်ပဲ၊ ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ နောက်မဆုတ်ဘူးဟွန့် . . . . . . “ အေးလေ ပြီးတာပဲ နင်တို့မလိုက်လဲ ငါ့ဘာသာငါတယောက်တည်း သွားမယ်။ ဒီသူငယ်ချင်း၂ယောက်ရှိလို့ အကူအညီလေးတောင်းပါတယ်။ ” . . . . . . “ ဟဲ့ဟဲ့ အိအိ ” . . . ပြောချင်တာပြောပြီး ဇတ်တောက်ဇတ်တောက်နဲ့ ထွက်သွားတဲ့ အိအိဖြူနောက်ကို ၂ယောက်သား ပြာတိပြာယာနဲ့ လိုက်ကြရပါတယ်။ သူတို့သူငယ်ချင်း ၃ယောက်မှာ အိအိဖြူက အချောဆုံး၊ အတောင့်ဆုံး နဲ့ အကဲဆုံး။ စိမ့် ကရိုးတယ် ။ အသားကသိပ်မဖြူသော်လည်း ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းတွေက အိအိဖြူလောက်ရှိပေမယ့် အနေအထိုင်၊ အပြင်အဆင်သိပ်မရှိတာမို့ ပေါ်ပြူလာမဖြစ်လှ ။ သက်ထား ကတော့စာတော်ပြီး လုံးလုံးကျစ်ကျစ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်။ စိမ့်လောက်မတုံးမအပေမယ့် စိတ်ကစားဖို့ထက် ကျောင်းစာကိုပဲ အာရုံထားတဲ့သူ ။ တူတာတခုက စိမ့်ကော သက်ထားပါ အိအိဖြူကိုအလိုလိုက်ကျရသည် ။ ရုပ်ခလေးချောသလောက် အလှအပမက်ပြီး စိတ်ကစားတတ်တဲ့ အိအိဖြူကို သူတို့ဝိုင်းထိန်းဖို့ကြိုးစားသော်လည်း ခုတော့ချစ်သူငယ်ချင်းကြီးက ရည်းစားတောင်ကောက်ရသွားလေပြီ ။ ဝိုင်းဝိုင်းလည် လိုက်နေကြတဲ့အထဲက ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ရေလျှံလျှံ အတန်းဖော်ကောင်လေး တယောက်ကို ဂေါက်ခနဲ ပြန်ကြိုက်လိုက်ချင်းဖြစ်သည် ။ မည်သူ့မှလည်း မတိုင်ပင် ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ် အဖြေကောက်ပေးလိုက်တာ ။ ၂ပတ်သာရှိသေးသည်မို့ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေသာ သိကြသေးသည်။ သိပ်နာမည်ကြီးလို့လဲမဖြစ် ။
တခြားပြိုင်ဖက်ကောင်လေးတွေသိရင်လည်း ရဲနိုင်အတွက်မကောင်းသလို ဆရာမတွေနားထိပေါက်ကြားသွားလို့ကတော့ ၂ယောက်လုံးမချောင်ပါချေ။ အဆောင်ပျက်ကြီးဆိုတာကတော့ ကျောင်းမှာ အရင်တုန်းကစာသင်ဆောင်တွေထားခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ဘာမှမသုံးပဲပစ်ထားတဲ့ ၂ထပ်ဆောင်ကြီး ။ သူတို့ ၃ယောက်ရောက်သွားတော့ အဲဒီ့အဆောင်ကြီးရှေ့မှာ ၅တန်းခလေးမတွေထုပ်ဆီးတိုးနေကြသည် ။ အဆောင်ထဲတော့ ပြိုကြမှာကြောက်လို့ပဲလား၊ ခလေးတွေပီပီသရဲပဲကြောက်လို့လားတော့မသိ ၀င်မဆော့ကြ ။ ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်း၏ အဆောင်အိုကြီးများရဲ့ တဆင့်စကားတဆင့်နား ရာဇ၀င်များအတိုင်း ကျောပေါက်သရဲနဲ့ ခြေကလိမ်မတို့ရှိသည်ဟုနာမည်ကြီးကာ လူရှင်းလေသည် ။ . . . “ နင်တို့ ၂ယောက်ဒီအ၀မှာ ထိုင်စောင့်နေနော် ။ ဆရာမတွေလာတာတွေ့ရင် မြန်မြန်လာပြော။ ” . . . အိအိဖြူ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို သေချာမှာရင်း လှေကားပေါ်ကနေ ခေါင်းလေးပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ ရောက်ကြောင်းအချက်ပြနေတဲ့ ရဲနိုင်ဆီသို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ တက်သွားလေသည် ။ . . . “ ဟဲ့ နင်ပေါက်ကရတွေ မလုပ်နဲ့နော်။ ” . . . မတိုးမကျယ်နောက်ကနေ လှမ်းသတိပေးတဲ့ သက်ထားရဲ့ အသံကိုတောင် အိအိဖြူတယောက်ကြားလိုက်ရဲ့လားမသိ ။ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း သုံးလေးခွန်းလောက်ပြောပြီးတာနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းကို မရမကအတင်းလာစုပ်ပြီးနမ်းတော့ အိအိဖြူ တော်တော်တောင်လန့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာရမလဲ ဒါမျိုးအတွေ့အကြုံလေးတွေ လိုချင်လို့ရည်းစားထားကြည့်တဲ့ အိအိဖြူ သူ့နှုတ်ခမ်းကို ပြန်ဆွဲပြီး စုပ်ပလိုက်တာပေါ့ ။ မှတ်ပြီလား။ နိုင်ငံခြားကားတွေထဲမှာ တွေ့နေကျမို့ အထူးအဆန်းမဟုတ် ။ ဒါပေမယ့် အရသာကြီးကတော့ တမျိုးကြီးပဲ ။ ဟိုမမိဒီမမိ ချောကျိကျိနဲ့ ဘယ်နားကို တွယ်ထားရမလဲ မသိတာ။ ( ပထမဆုံးအကြိမ် နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာမို့ မကျွမ်းကျင်လို့ဖြစ်မှာပါ မကောင်းရင် ရုပ်ရှင်တွေထဲ ဒီလောက်ဘယ်ပါပါ့မလဲနော့် ) . . . ဒါကအိအိဖြူရဲ့အတွေး။ . . . “ အိအိ ကိုတအားချစ်တယ်ကွာ ” . . . မျက်နှာချင်း အပ်ရာက ပြန်ခွာခွာပြီးချင်း လှိုက်ဖိုသံကြီးနဲ့ ထပ်ပြောတဲ့ ရဲနိုင်အသံက ရင်ခုန်ချင်စရာမကောင်းပဲ ရယ်စရာသာကောင်းနေပါတော့တယ်။ . . . “ အင်း ” . . . . . . “ တအားလှတာပဲ ” . . . ပါးစပ်ကသာ တအားလှနေတာ လက်ကတော့ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ခါးကနေအပေါ်တောင်တက်လာသလိုပဲ။ ချည်သားအင်္ကျီပါးပါးနဲ့ အတွင်းခံဘော်လီ တို့ ၂ထပ်ပေါင်းခံထားတဲ့ ရင်ပုံလေးရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းကို ရဲနိုင်လက်တွေက မထိတထိလိုလိုနဲ့ ထိနေပြီ။ . . . ( အားနာလို့ ခါးလေးပေးဖက်ထားပါတယ်။ ဟင့် . . . ငါ့ဖက်သလိုလိုနဲ့ အသားယူနေတာ။ ) . . . အိအိဖြူစိတ်ထဲကပဲ ရေရွတ်ရင်း နှုတ်ကတော့ဘာမှမပြောမိပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သာယာမိသလိုလိုနဲ့ဆိုတော့ ။ ခါးဖက်ချင်း ကိုယ်နှိုက်ကိုယ်က အသားယူခြင်း ဖြစ်ပေမယ့် အိအိဖြူကတော့ နို့နို့ကိုထိမှပဲ အသားယူတယ်လို့ယူဆမိလေတယ်။ . . . “ အိအိကော ငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဟင် ” . . . . . . “ အင်း ချစ်တယ် ” . . . “ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဟင် ” . . . ဖန်တရာသေ သမီးရည်းစား စကားများဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ကတော့ခုမှကြိုက်စ ဆိုတော့ သုံးလို့ကောင်းတုန်း။ . . . “ ချစ်လို့နင်ပြောတဲ့နေရာလာခဲ့တာပေါ့ ။ ” . . . ဂလိုအဖြေကိုရတော့ မောင်မောင် ရဲနိုင် သူ့အလိုကိုလိုက်မယ်လို့များ ယူဆလိုက်သလားမသိ ချိုင်းကြားကလက်က ရှေ့ဘက်ကို ထပ်တက်လာသလိုပဲ။ အပျိုရင်သားလေးရဲ့ အိစိစိ အထိအတွေ့လေးတွေ ကလည်း လူပျိုရိုင်းလေး ရဲနိုင်ကို ရင်ခုန်သံမြန်စေသလို ခုထိမငြင်းသေးတဲ့ အိအိဖြူကြောင့်လည်း ဒီထက် ရှေ့တိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ . . . “ တိုးတယ်။ ထိတယ်။ နုတယ်။ အိတယ်။ ” . . . ရဲနိုင်ရဲ့လူပျိုလက်တွေက အိအိဖြူရဲ့ အပျိုနို့အုံ နူးနူးညံ့ညံ့လေး ကိုအင်္ကျီပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း စူးစမ်းနေပါတယ်။ . . .
“ အိ ၊အင်း . . . အင်း . . . တော်ပြီကွာ ဘာတွေလာလုပ်နေမှန်းမသိဘူး ။ ” . . . မသိမသာပွတ်နေတုန်းကတော့ လုပ်တိုင်းခံနေပြီး ချိုချိုလေးတဖက်ကို ညှစ်ကြည့်လိုက်တော့မှ အိအိဖြူဆီက ကန့်ကွက်တဲ့စကားသံလေး စထွက်လာပါတယ်။ . . . “ ချစ်သူတွေပဲ အိအိရယ်၊ ခဏလေးပဲအချိန်ရတာကို။ ” . . . ပြောလည်းပြော လက်နောက်တဖက်ကလည်း နာမည်ကြီးအိအိဖြူရဲ့ ဖင်သားကြီးတွေဆီကို ဆင်းသည်။ . . . “ ဟင့် ” . . .ဒါက အိအိဖြူဆီက ထွက်လာတာ။ မျက်နှာလေးတော့ နည်းနည်းလည်းအနီရောင်သမ်းလာသလိုပဲ ။ ဘယ်လောက်ပဲ မွေးရာပါရဲတင်းတဲ့ မိန်းခလေးဖြစ်ပလေ့စေ၊ ပထမဆုံးအကြိမ် ယောင်္ကျားလေးလက်နဲ့ အကိုင်အတွယ်ခံရတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရှက်စိတ်လေးကို အပြီးတိုင် ဖွက်ထားလို့မရပါချေ ။ . . . “ အားပါးပါး။ အိနေတာပါ။ ” . . . ရဲနိုင်စိတ်ထဲကရေရွတ်တဲ့ အသံ။ ရင်မှာ တဖက်၊ တင်မှာတဖက်နဲ့မို့ လက်မအားတဲ့ ရဲနိုင် ပါးစပ်နဲ့လျှာကို သုံး သည်။ ပါး၊ နှုတ်ခမ်း၊ ဆံပင် ၊ နားရွက် ၊ လည်ပင်း တခုမှမလွတ်အောင် နမ်းကြည့်သည်။ သူလုပ်သမျှကို အိအိဖြူက ရှက်ပြုံးလေးပြုံးရင်းခံနေလေသည် ။ တဟင့်ဟင့်ဖြင့်ကိုယ်တွယ်နမ်းရှုံ့သမျှကို အလိုက်အထိုက်ခံရင်း အိအိဖြူလည်း ကလိကလိဖြစ်လို့လာနေပါပြီ။ အစတည်းကလည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မနိုင်ပဲ ရွပိုးထိုးနေတဲ့ ကောင်မလေးဆိုတော့ ခုလောက်အနယ်ခံလိုက်ရတာနဲ့တင် ပေါင်၂လုံးကြားမှာ ပုရွက်ဆိတ်လေးများပြုံတက်လာသလို ရွစိရွစိ။ . . . “ ဟင်း . .ခွိ ခွိ ” . . . အိအိဖြူ ဖီလ်တက်လို့ ငြီးလိုက် ဂုတ်သားအနမ်းခံရရင်ယားလို့ ရယ်သံလေးတွေထွက်လာလိုက်နဲ့။ အနှီ မောင်ရဲနိုင်ရဲ့ ညီတော်မောင်လည်း ပုဆိုးအောက်မှာ ခေါင်းမတ်မတ်ထောင်လေပြီ။ နောက်တဆင့်တက်ကာ အင်္ကျီထဲကိုလက်သွင်းဖို့ ကြံလိုက်တုန်းရှိသေးတယ်။ . . . “ ကလင်င်င်င် ကလင်င်င်င် ကလင်င်င်င် . . . ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့ကြသောနေ့ဆိုတော့ အင်ထရိုမှာတင် အတော်ကြီး ကြာသွားသောကြောင့် ရဲနိုင်တယောက် နို့ဆော့ဖင်ကိုင် အဆင့်ဖြင့်သာ ကျေနပ်လိုက်ရသလို အိအိဖြူလည်း အရည်ပင်မစိုလိုက် ။ သို့သော်လည်း နောက်နေ့နောက်နေ့များမှာတော့ တချို့အဆင့်များကိုကျော်လွှားလို့ ပျော်ပါးဖို့ ရဲနိုင်ကြံလေပြီ ၁ လဆိုသော အချိန်ကာလအတွင်းမှာ ရဲနိုင်နဲ့ အိအိဖြူတို့ရဲ့ ပတ်သတ်မှု အတိုင်းအတာဒီရေမှာ သိသိသာသာ တိုးပြီးရင်းတိုးလို့ လာပါသည်။ အပေါက်စောင့်များဖြစ်သော စိမ့် နှင့် သက်ထားတို့ အတွက်ပင်လျှင် ကျောင်းဆင်းချိန် အဆောင်ပျက်ကြီး ကိုသွားရသည်မှာ နေ့ဓဒူဝ အလုပ်ဖြစ်လာသည်။ . . . “ အင်း အင်း ” . . . . . . “ အား ကျွတ်ကျွတ် အား စွတ်ထိုးထည့်မနေနဲ့ အကောင်ရဲ့။ ငါ့အမြှေးပါးပေါက်သွားရင် နင်လျှော်မှာလား ။ အင်းဟယ် အင်းဟယ် ” . . . မတ်မတ်ထောင်နေသော တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် လိင်တံကြီးကို ဘယ်ညာရမ်းသွားအောင် လက်ဖဝါးဖြင့် ပုတ်လိုက်ရင်း အိအိဖြူ ထအော်ပါတယ်။ . . . “ ဟီးဟီး ကောင်းလိုက်တာ ထပ်ရိုက်ပေးပါလား ” . . . . . . “ ဘာကောင်းတာလဲ ။ နောက်တခါဆို လိမ်ချိုးပစ်မယ် ဟွန်း ” . . . . . . “ အေးပါ အိအိရယ် စကားများမနေနဲ့ ကျောင်းတောင်ပြန်တက်တော့မယ် ” . . . . . . “ အဲတော့ ဘာဖြစ်တုန်း ” . . . . . . “ ဒါဖြစ်တယ် ” . . . “ ရှီး အင်းးးးးးး ” . . . ခုနက ထုတ်လိုက်ရသော လက်ညှိုးဖြင့်ပင် အိအိဖြူလေးရဲ့ ပိပိအကွဲကြောင်းကြီးကို ပွတ်ဆွဲလာလိုက်ရာ ထိပ်နားကအစိလေးကိုပါ ခလုတ်တိုက်သွားပါသည် ။ အိအိဖြူ မျက်ခွံများစင်းလို့ နှုတ်ဖျားမှ ငြီးသံလေး ထွက်လာသည် ။ ချိန်းတွေ့ကျ အဆောင်ပျက်ကြီးရဲ့ အခန်းထောင့်တနေမှာ ဒီအတွဲကဲနေကြသည် ။ ၂ယောက်စလုံးရဲ့ ပုဆိုးနဲ့ ထမီတွေက ခါးမှာလုံးစုနေသောကြောင့် ဗလာဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတဲ့ အောက်ပိုင်းကြီးတွေ ဖွေးပြောင်နေကြသည် ။ သူတို့ခြေရင်းနားက ကြမ်းပြင်မှာ နှင်းဆီနီရောင် ပင်တီဘောင်းဘီလေးတထည်က အလိပ်လိုက်လေး ပုံကြနေသည် ။ ရဲနိုင်ကတော့ သည်ရည်းစားဦးလေးနဲ့ စချိန်းတွေ့ဖြစ်ကြကတည်းက အောက်ခံဘောင်းဘီ မ၀တ်တော့ ။ ငြင်းခုံနေသော စကားသံများတိတ်ကာ အိအိဖြူရဲ့အော်ငြီးသံလေးတွေကိုသာ ကြားရတော့သည် ။ ဒူးထောင်၍ ကားထားသော အိအိဖြူ ပေါင်ကြားမှာ ရဲနိုင်ရဲ့လက်တွေက စုန်ချီဆန်ချီ ကစားလို့နေသည် ။ တင်းကျပ်စွာ စိကပ်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ကြားထဲ လှုပ်ရှားနေသော လက်ညှိုးမှာ ဟော့ဒေါ့ကြီးကြား အညှပ်ခံထားရသော ၀က်အူချောင်းနှယ် ။
အရည်ရွှမ်းသော အရွမလေး အိအိဖြူရဲ့ စောက်ရည်ကြည်တွေကတော့ ဖင်ကြီးနှစ်ခြမ်းကြား ထဲသို့ပင် တောက်တောက်ယိုစီးနေသည် ။ အပြန်အလှန်ပင် ။ အိအိဖြူရဲ့ ဖြူနုတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကလည်း ရဲနိုင်ရဲ့ပေါင်ကြားမှ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဒုတ်တံကြီးပေါ်မှာ ရှေ့တိုးနောက်ငင် လှုပ်ရှားလို့ ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည် ။ တချက်တချက် ဆိုလျှင်အားရပါးရ ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင် လိုက်ပြီးလျှင် ဆွဲလိမ်ချရာ ရဲနိုင်ကိုယ်ကြီးပင် တွန့်တွန့်သွားရပါသည် ။ . . . “ ညည်းတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ ” . . . . . . “ ဟင် တီချယ်ကြီး ” . . . လှေကားခြေရင်းမှာ ခေါင်းငုံ့လို့ Bio ကျက်နေကြသော စိမ့်နှင့် သက်ထား ထခုန်မိမတတ် လန့်ဖြန့်သွားသည်။ သူတို့ရှေ့မှာက ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်နှင့် အခြားဆရာမ၃ယောက် ။ ၂ယောက်စလုံး ဖုတ်ဖက်ခါ ထကြရသည်။ . . . “ ဟိုဟို စာကျက်နေတာပါ တီချယ်ကြီး ” . . . နည်းနည်းလေးပိုသွက်တဲ့ သက်ထားက အမြန်ပြန်ဖြေလိုက်ပေမယ့် ဂနာမငြိမ်ဖြစ်သွားသော ၂ယောက်စလုံးရဲ့ အမူအရာတွေက ဘယ်လိုမှဖုံးကွယ်ထားလို့မရ။ . . . “ ဟုတ်သားပဲ ညည်းတို့က စာကျက်နေတာ။ ဟိုအတွဲကော ဘယ်မှာစာကျက်နေကြသလဲ ။ ” . . . . . . “ ရှင် ” . . . . . . “ အပေါ်ထပ်မှာလား။ ” . . . . . . “ ဟိုသမီးတို့မသိပါဘူးပါဘူး တီချယ်ကြီး ။ ” . . . . . . “ မသိဘူးလား ” . . . . . . “ အ အား အ ” . . . . . . “ အသံမထွက်နဲ့ အသံလုံးဝမထွက်နဲ့ အပေါ်မှာရှိတယ်မလား။ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ရဲ့ လက်ကသက်ထားရဲ့ ပေါင်ရင်းနားကအတွင်းသား ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဆွဲလိမ်ထားလေပြီ။ သက်ထားရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်လေးဖြင့်ပင် ၁လက်မခန့်သာကွာတော့မယ်။ . . . “ ဟုတ် ဟုတ် အအား ” . . . သက်ထားချက်ချင်းပင် မျက်ရည်လေးဝဲတက်လာပါသည်။ . . . “ ကဲညည်းတို့၂ယောက်ပါ လိုက်တက်မယ်။ ခြေသံလုံးဝမထွက်စေနဲ့။ ညည်းတို့ကြောင့် သူတို့လွတ်သွားရင် ညည်းတို့၂ယောက် သူတို့အစားခံရမယ် နားလည်လား။ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ဦးဆောင်ကာ သူတို့တသိုက်ခြေသံလုံလုံ နင်းလို့အပေါ်ထပ်ဆီ တက်ကြပါသည် ။
။ လူဖမ်းပွဲကားစပါပြီ ။ “ အား အင်း ကို အား ” . . . ရဲသူသိသည် ။ အိအိဖြူ ပြီးတော့မည် ။ သူ့ရဲ့ အသည်းကျော်ရည်းစားလေးက အင်မတန်ထန်တဲ့ကောင်မလေး ။ နို့ကိုင်ရုံဖြင့် အရည်ယိုလို့ စောက်ဖုတ်နှိုက်လျှင် အရည်ပန်းထွက်သော မိန်းခလေးဖြစ်သည် ။ သံဝါသပြုတဲ့ အဆင့်ကို မရောက်ကြသေးသော်လည်း နေ့စဉ်ချိန်းတွေ့တိုင်း တယောက်နှင့် တယောက် ပြီးအောင်လုပ်ပေးကြသည်မှာ ၂ပတ်ခန့်ရှိလေပြီ ။ အခုလည်း ပေါင်ကြီး၂ချောင်းကို အားပါးတရ ဖြဲကားလို့ အဖုတ်အနှိုက်ခံနေသည် ။ ရဲနိုင်ရဲ့ လက်ခလယ်က ရွှဲစိုနေသော စောက်ခေါင်းထဲကို တဗွက်ဗွက်နေအောင် အ၀င်အထွက်လုပ်နေချိန်မှာ စောက်ဖုတ်ကိုအုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ဖဝါးက ပြူတစ်တစ်လေးဖြစ်နေသော စောက်စေ့လေးကို ကျိန်းတက်နေအောင် ပွတ်မိနေသည် ။ လက်ညှိုးနဲ့ လက်သူကြွယ်ကတော့ဖုတ်ဖုတ်ဘေးသားထူထူကြီးတွေပေါ်မှာ ယှဉ်လျက် ။ ရဲနိုင်ရဲ့လိင်တံကြီးကကိုင်လို့ ဂွင်းတိုက်ပေးနေသော အိအိဖြူရဲ့ လက်ချောင်းအသွားအလာတွေက ပိုမြန်လာသလို ဆုပ်ကိုင်ထားမှုတွေလည်း ပိုပြီးတင်းကျပ်လာပါတယ် ။ အိအိဖြူပြီးသည်နှင့် ရဲနိုင်လည်းတင်းထားသော စိတ်ကိုလျှော့ကာ တပြိုင်တည်း ပန်းထုတ်မည်ဟု ကြံရွယ်ထားသည် ။ နတ်ပြည် ရောက်လုလု ဖြစ်နေသော အာရုံများကြောင့် ၂ဦးသားပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝသတိပြုမိပါချေ ။ . . . “ အင့် အင့် အားးး အင့် ” . . . . . . “အရှက်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ ” . . . ရုတ်ခြင်းကြီးပေါ်လာသော သူတွေကြောင့် ရဲနိုင်မင်တက်သွားသည်။ တီချယ်ကြီးဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် နှင့်ဆရာမတွေအပြင် သက်ထားနဲ့စိမ့်တို့ပါ ဘွားခနဲ ။ အိအိဖြူလည်းတွေ့သည် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ မဟာပေါက်ကွဲမှုကြီးက အခုချိန်မှာ ရပ်လို့ရသောအရာမဟုတ် ။ ကော့ပျံ လက်စက ဆက်ပြီး ကော့ပျံလန်နေသည်။ ဓာတ်လိုက်သလို တွန့်ခါနေသော ကိုယ်လုံးကြီးကလည်းအရှိန်မသတ်နိုင်တော့။ လန့်ဖြန့် ရှက်ကြောက်မှုတွေကြောင့် ထမီကိုဆွဲချချင်ပါသော်လည်း တွန့်တွန့်လူးနေတာကို မရပ်နိုင်။ ပါးစပ်ကို ပိတ်ဖို့ကြိုးစားသော်လည် ငါးကိုရေပေါ်တင်လိုက်သလို ဟစိဟစိပါးစပ်ကနေ တအင့်အင့် ဖြင့်အသံကဆက်ထွက်နေသည်။ ဗလာဖြစ်နေသော အောက်ပိုင်း စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ စောက်ရည်တွေကတော့ ထွက်နေဆဲ ။ ထိုမျှလောက်ထိ တွန့်တွန့်လူးကာ စောက်ရည်ဖြန်းနေသာ အိအိဖြူ နှင့် အစွမ်းကုန်မတ်ထောင်နေသော ရဲနိုင်လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို မြင်ပြီး ပါလာသောဆရာမများနှင့် စိမ့်နဲ့သက်ထား တို့ပင် ရှက်စိတ်တွေမွှန်ထူပြီး မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ကုန်ကြသည် ။ ကာယကံရှင် ၂ယောက်တော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ ။ အိအိဖြူလိုပင် အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေသူကတော့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်။
ကိုယ်လုံးတီးနီးနီး အတွဲကိုတွေ့လိုက်ရလို့ ဖီလ်တက်သွားတာလည်းမဟုတ် ရှက်သွားတာလည်းမဟုတ်။ ဒေါသဖြင့်တုန်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။ ခုနက အမ်းသွားသောရဲနိုင် ပုဆိုးဖြင့် သူ့လိင်တန်ကြီးကို အုပ်သလို အရှိန်သေသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိအိဖြူ လည်း ခါးမှာစုနေသောလုံခြည်ကို ဆွဲချကာ ဖုံးဖိသည်။ ကြိမ်လုံး ရိုက်ချက်တွေ ဘယ်တော့ကျလာမလဲ လို့စောင့်မျှော် နေပေမယ့် ထူးဆန်းစွာဖြင့်မကျလာ ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကတော့ မျက်နှာငယ်လေးတွေဖြင့် ခေါင်းငုံ့ထားသော သူ၂ယောက်ကို မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသော မျက်လုံးများဖြင့်သာစိုက်ကြည့်နေသည် ။ ဖင်တုံးလုံးဖြင့် လူမိခံလိုက်ရသည်သာမက လူအများရှေ့ စောက်ရည်ပါပန်းပြလိုက်ရသည်မို့ ရှက်လွန်လွန်းလို့ တဟင့်ဟင့်နှင့် အိအိဖြူ မျက်နှာလေး ရဲရဲတွတ်နေသည် ။ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည်နည်း ။ . . . “ မင်းတို့ကိစ္စပြီးပြီမလား။ သွားကြမယ်။ ” . . . သွားဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တဲ့ အခါမှ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ခြေထောက်အောက်နားမှာ အလိပ်လိုက်ရှိသော ပင်တီလေးကို အိအိဖြူ ကုန်းကောက်ဖို့ပြင်လိုက်သည်။ . . . “ ညည်းဒီနေ့ ဒါမလိုတော့ဘူး အိအိဖြူ ” . . . ကြိမ်လုံးထိပ်ဖြင့် ဘေးဘက်ကို တွန်းဖယ်လိုက်သလို အေးစက်သောအသံဖြင့် ပြောလိုက်တဲ့ စကားသံကြောင့် ကိုင်းလိုက်သော အိအိဖြူရဲ့ခါးတွေပြန်မတ်သွားပါတော့သည်။ . . . “ အိ ဟီးဟီးဟီး ” . . . ဒီအသံကတော့ အိအိဖြူဆီက ထွက်လာသောငိုရှိုက်သံ ။မုန့်စားကျောင်းတက် ပြီးသည်မှာ ၁၀မိနစ်ခန့်ရှိပါပြီ ။ Physics အချိန်မို့ ၁၀တန်း (က) မှကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆရာမကြီးအလာကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် ။ အင်မတန် စည်းကမ်းကြီးပြီး တိကျသော ဆရာမကြီးမို့ ဒီမျှလောက် ဘယ်တုန်းကမှနောက်မကျဖူးပါ ။ စကားတွတ်ထိုးရင်း၊ ဆီးထုတ်စားရင်း စောင့်နေကြတဲ့ သူများ မျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့် ၀င်လာသော ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ကြောင့် ချက်ချင်းပဲ မတ်တပ်ရပ်ကာ Good Afternoon Teacher ဟုသံပြိုင်ရွတ်ရင်း နှုတ်ဆက်ကြပါသည် ။ အလိုက်သင့် ပြန်နှုတ်ဆက်ပြီး နောက်မှာ အခန်းထဲလိုက်ဝင်လာတဲ့ သူများကြောင့် တခန်းလုံး ခေါင်းတွေထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ့တိုးတိုးသံလေးတွေ ကျွတ်စီကျွတ်စီ ထွက်လာသည် ။ လက်ကလေးတွေပိုက် ခေါင်းလေးတွေငုံ့ကာ တန်းစီလို့ဝင်လာသော ရဲနိုင်၊ အိအိဖြူ၊ စိမ့် နှင့် သက်ထားတို့ရဲ့ နောက်မှာ ဒါဇင်ဝက်ခန့်သော တခြား ဆရာမများလည်းလိုက်ပါလာပါတယ် ။ တရှုံ့ရှုံ့ ဖြစ်နေသော မိန်းခလေး ၃ယောက်နှင့် အံကြိတ်ထားသောရဲနိုင်တို့ကို အခန်းရှေ့က ၂ပေသာသာခန့်မြင့်သော သစ်သား stage စင်လေးပေါ် ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်က တက်ခိုင်းပါတယ် ။ တခန်းလုံးမှနေ၍ ကောင်းကောင်းမြင်ရသော အတန်းရှေ့က ထိုနေရာလေးပေါ် မှာ ၄ယောက်စလုံး တန်းစီလို့ ကျောက်သင်ပုန်းနား ကျောကပ်ကာ မတ်တပ်ရပ်ကြရပါတော့သည် ။ နောက်ကပါလာတဲ့ ဆရာမများကတော့ လွတ်တဲ့ခုံမှာ ၀င်ထိုင်သူကထိုင် ဘေးဘက်နံရံနားမှာ မတ်တပ်ရပ်သူက ရပ်လို့ နေကြပါတယ်။ . . . “ ကဲ မင်းတို့အားလုံးကတော့ သိချင်နေကြမှာပဲ။ မင်းတို့ရဲ့ ဒီသူငယ်ချင်းအကောင်းစားကြီးတွေ ဘာတွေများလုပ်ခဲ့ကြသလဲလို့ ” . . . တတန်းလုံး တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကို ကြည့်နေကြသည် ။ . . . “ မင်းတို့သူငယ်ချင်း ရဲနိုင်နဲ့အိအိဖြူတို့ ဟောဟိုဘက်က အဆောင်ပျက်ကြီးထဲမှာ ကျောင်းသားအရွယ်တွေ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် အရာတွေလုပ်နေတုန်း တီချယ်တို့လက်ပူးလက်ကြပ်ဖမ်းမိခဲ့တယ် ။ ” . . . တခန်းလုံး တီးတိုးသံတွေတွေချက်ချင်း ဆူညံသွားပါတယ် ။ စားပွဲခုံကို ကြိမ်လုံးကြီးနှင့် တဗြန်းဗြန်းရိုက်လိုက်ရင်း . . . “ စိမ့်နဲ့သက်ထား တို့ကလည်းလူမိုက်အားပေး လုပ်ပြီးစောင့်ကြပ်ပေးတယ် ။ အဲဒီ့အတွက်သူတို့ကို နောင်မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင် အပြစ်ပေးရမယ် ။ မင်းတို့ကျန်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း နမူနာဖြစ်သွားပြီး သူတို့ လိုမဖြစ်အောင်လို့ပဲ ။ ” . . . ဆရာမကြီး ပြောစကားဆုံးသွားတာနဲ့ ကာယကံရှင်တွေကော အတန်းသူအတန်းသားတွေပါ သိနေကြပါပြီ ။ ဖင်သားနီအောင် အတီးခံရတော့မယ်ဆိုတာ သေချာနေပြီ ။ စိမ့်နှင့် သက်ထားဆိုလျှင် စာလုပ်တဲ့သူများဖြစ်သလို အနေအထိုင်အေးဆေးကြသူမို့ ဆရာမများက ချစ်ကြကာ ၇တန်းကတည်းက ဆရာမများ၏ ကြိမ်လုံးဒဏ်မှ ကင်းဝေးနေသူတွေဖြစ်သည် ။ အခုမှ ကြံရာပါဖြစ်ကာ ၂ချောင်းပြူးကြိမ်လုံးကို မြည်းစမ်းရတော့မည် ။ ဒါက သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အပြစ်ဒဏ်။
ဒါပေမယ့် . . . . . . “ တို့များငယ်ငယ်တုန်း ကွန်ဗင့်(convent ) ကျောင်းမှာတုန်းက အမှားကြီးကြီးကျူးလွန်လို့ရှိရင် ဆရာမကြီးတွေက အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဂါဝန်ကိုလှန်ပြီး ရိုက်တယ် ။ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ပြောနေရင်းက အပြစ်သားကျောင်းသားကျောင်းသား၎ယောက်ကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး . . . “ ခုမင်းတို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်က ငါတို့တုန်းကအဆိုးဆုံးအမှားထက်တောင် ပိုပြီးဆိုးသေးတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ မင်းတို့၎ယောက်ကို ဒီနေရာမှာပဲ လုံခြည်ကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ရိုက်ရလိမ့်မယ် ။ ” . . . တမဟုတ်ချင်း တတန်းလုံး ပွက်လောရိုက်ထွက်သွားသည် ။ ကျောင်းသားတွေတင်မက ကျန်တဲ့ဆရာမများပါ မျက်လုံးပြူးကုန်ကြပါတယ် ။ ဘယ်နှယ့် ဒီအပျိုအရွယ် ကျောင်းသူကြီးတွေကို ဖင်ချွတ်ရိုက်မယ်တဲ့ ။ ဒါကပရိသတ်တွေ ဆူညံကုန်တာ ။ အရှေ့ကကျောင်းသူချော ၃ယောက် ကတော့ ငုံ့ထားတဲ့ခေါင်းတွေ ထောင်ပြီး မျက်တောင်မခတ်သော မျက်လုံးတွေနဲ့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကို ကြောင်ကြည့်နေကြသည်။ မယုံကြည်နိုင်သောအကြည့်တွေ ။ နောက်ထပ် ကြိမ်လုံးနဲ့ စားပွဲထိရိုက်သံဖြင့် ဆူညံနေမှုများကိုဖြိုခွင်းလိုက်ပြီးနောက် . . . . . . “ အားလုံး တိတ်ကျစမ်း။ နောက်ထပ်ဆူလာရင် အဲဒီ့သူတွေပါ ဒီမှာလာပေါင်းသွားရမယ် ။ ” . . . အတန်းသားတွေ ငြိမ်ကျသွားပေမယ့် အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ဗလောင်ဆူနေကြပြီ ။ နုထွား ဖွံ့ဖြိုးပြီးစ ဖင်လုံးကြီးတွေကို တခန်းလုံးရှေ့မှာ ဖော်ပြီးပြရတော့မှာမို့ ကာယကံရှင်အပျိုမတွေ ရှော့ရလုနီးနီး ဖြစ်နေကြသည် ။ သက်ထားစိတ်ထဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့တတွင်တွင်ပြောနေသလို စိမ့်မျက်ရည်တွေ စီးလို့ ခေါင်းတရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်။ အားလုံးရဲ့တရားခံ အိအိဖြူကတော့ ထူးခြားစွာနဲ့ ငြိမ်သက်လို့ တရှုံ့ရှုံ့သာငိုနေသည်။ သူ့ကြောင့် သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပါ အဆစ်ပါသွားပြီလေ ။ မကြာမီ သူတို့သူငယ်ချင်း၃ယောက်လုံး ကုန်ေးကာက်စရာမရှိအောင် အရှက်လုံးလုံး ကွဲရတော့မယ် ။ တဦးတည်းသော ယောင်္ကျားလေး ရဲနိုင်မှာလည်း ရှက်ကြောက်မှုဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ထက်စာလျှင် ချစ်ရပါသော အိအိ ရဲ့ရှက် အတွက် စိုးရိမ်မှုပို လို့နေပါသည် ။ အတန်းထဲမှ ကျောင်းသားများတော့ အာတွေခြောက်ပြီး ရင်တွေတုန်ကုန်သည် ။ နာမည်ကြီး အလှပဂေးမလေး အိအိဖြူရဲ့ ထမီမကပ်သော မြင်ကွင်းကို တွေ့ကြရတော့မယ် ။ အပိုဆုအနေနဲ့ သက်ထားနဲ့စိမ့်ပါ ပါသေးတယ် ။ ကျောင်းသူနဲ့ ဆရာမအငယ်တွေလည်း မမြင်ဖူးမကြုံဖူးသော အဖြစ်အပျက်ကို တွေ့ရတော့မှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည် ။ . . . “ ရဲနိုင်နဲ့ အိအိဖြူက ၅ချက်ဆီ၊ အားပေးအားမြှောက်လုပ်တဲ့ ဟို၂ယောက် ၃ချက်စီ အရိုက်ခံရမယ် ။ ပြောထားတဲ့ အတိုင်းတင်ပါးပြောင်ပြောင် ပေါ်ကိုရိုက်မှာ ။ ” . . . ပြောရင်းဆိုရင်း ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် လက်ထဲကကြိမ်လုံးကြီးကို လေထဲမှာ ဝှီးခနဲနေအောင်လွှဲရင် ဟန်ရေး၂ချက်လောက် ပြလိုက်ပါတယ် ။ ပြီးလျှင် အချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ . . . “ ဒီဘက်အစွန်က မသက်ထား ထမီကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ဒီနားလာခဲ့ ”“ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ” . . . သက်ထား မျက်ရည်ရွှဲလဲနဲ့ ခေါင်းလေးဘယ်ညာရမ်းကာ ခါလို့ငြင်းသည် ။ အပျိုလေးတယောက်ဖို့ လုံခြည်ချွတ်ဖို့ ဒီလောက်တော့ မလွယ်ပါချေ ။ . . . “ ကဲ ညည်းဆက်ပြီး ငြင်းနေရင်ငါကိုယ်တိုင် လာချွတ်ပေးရလိမ့်မယ် ။ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ပြောပြောဆိုဆို ၄ယောက်တန်းမှာ အစွန်ဆုံးဖြစ်သော သက်ထားရှေ့သို့ လက်ထဲကြိမ်လုံးတရမ်းရမ်းဖြင့် လျှောက်သွားလေသည် ။ အတန်းထဲမှာ တော့ အပ်ကျသံပင်မကြားရအောင် တိတ်ဆိတ်လို့ ။ . . . “ ချွတ်စမ်း ” . . . ထမီစကို ဆွဲတော့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ရဲ့လက်ကို ပြန်ဆွဲရင်းကာရင်း သက်ထား ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုသည် ။ ထမီခါးပုံစကို ပြန်ဆွဲထားသည်။ . . . “ ညည်းထပ်ရုန်းရင် အောက်ခံပါ မချန်ဘူး ဖြစ်သွားမယ်နော် မသက်ထား ” . . . ခြိမ်းခြောက်စကားပြောရင်း ထမီစကို ထပ်မဆွဲတော့ပဲ ပေါင်တွင်းကြောတဖက်ကိုသာ အားရပါးရကိုင်ရင်း ဆွဲလိမ်လိုက်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နာရီဝက်မရှိခင် အချိန်ကပဲ ဒီလက်စကို တခါမြည်းစမ်းဖူးပြီးသား အခုနောက်တဖက်ကို တွယ်တာခံရပြန်ပြီ ။ တ အ အ နှင့် သက်ထားအော်သည် ။ ဒီတခါက ဂွကြားနှင့်ပိုပြီးတောင်နီးသွားသေးသည်။ နောက်တခေါက်များဆိုလျှင်တော့ သက်ထားရဲ့ အဖုတ်သားကြီးကိုပင် လိမ်ဆွဲမည်လားမသိ ။ . . . “ လက်ပိုက်ထားစမ်း ။ လက် ပိုက် ထား စမ်း ။ ” . . . တလုံးခြင်းနှင့် အာဏာသံပြင်းစွာပြောသော အသံကြောင့် သက်ထားလက်၂ဖက် ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ယှက်ထားလျက်သားဖြစ်သွားပါသည် ။ . . . “ အမလေး ဟီး ဟီး ဟီး ” . . . ပေါင်ရင်းကြောကို လိမ်ဆွဲထားရာက ထမီကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲချလိုက်သောကြောင့် လက်ပိုက်ထားသော သက်ထားလှမ်းဆွဲဖို့မမှီလိုက်တော့။ ကျောင်းထမီ အစိမ်းရောင်လေးက ခြေမျက်စိမှာပုံနေလေပြီ။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပေါင်သားလေးတွေက ၀င်းပလို့နေသည်။ ပေါင်ရင်းဂွဆုံ စက်စပိုင်နာ ပန်းနုရောင်လေးရဲ့ အစွန်းနားမှာ တော့ တီချယ်ကြီးလက်ရာ နီနေသော အကွက်လေးတွေက ဘယ်ညာ၂ဖက်စလုံးမှာ ရှိနေပါသည်။
မကူနိုင်မကယ်နိုင် ဖြင့် လူ၆၀ကျော်ရှေ့မှာ အောက်ပိုင်းတခုလုံး စက်စပိုင်နာသာကျန်တော့သော သက်ထား ရှက်လွန်းလို့ ရှိုက်ကြီးတငင်ကို ငိုလို့နေသည်။ . . . “ ဒီအရှေ့ထွက်ခဲ့ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း လက်မောင်းကိုကိုင်ရင်း ကျောက်သင်ပုန်းကို မှီပြီးရပ်နေသော နေရာမှ ရှေ့ဘက်၃လှမ်းလောက်အကွာ စင်၏အလည်တည့်တည့် အရှေ့အနောက်လွတ်သော နေရာကို ဆွဲခေါ်လာပါသည်။ ထမီကတော့ အရင်ရပ်ခဲ့သောနေရာမှာ ကွင်းလုံလေးပုံပြီး ကျန်ခဲ့ပါပြီ ။ စိတ်ကြိုက်နေရာကိုရောက်ပြီမို့ . . . “ ဟိုဘက်လှည့် ” . . . ဟုဆိုပြီး အတန်းဘက်ကို ဖင်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ သက်ထား ကိုယ်လုံးက စိမ့်နဲ့ အိအိဖြူလောက်မထွားပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဖင်လုံးလေးတွေက သူ့နေရာနဲ့သူ ပြည့်ဖြိုးကား ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိလှပါသည် ။ ပန်းနုရောင် စက်စပိုင်နာစကို ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်အကိုင် သက်ထားတကိုယ်လုံးဓာတ်လိုက်သလို တုန်တက်သွားသည် ။ သက်ထား အကြောက်လွန်သွားလို့လား မွှန်ထူနေပြီမို့လားမသိ ခုဏကလိုတော့ မငြင်းဆန် မရုန်းကန် ။ အရှက်မျက်ရည်တွေကတော့ တောက်တောက်တောက်တောက်နဲ့ ကြနေပြီ ။ အောက်ခံဘောင်းဘီလေး လျှောဆင်းသွားတာ နှင့်အတူ ဖြူဖွေးလှသော ဝိုင်းဝိုင်းစက်စက် ဖင်လုံးအစုံလိုက်လေးက အားလုံးရဲ့ မြင်ကွင်းထဲကို ၀င်လာပါသည် ။ ချွတ်ချရသော စက်စပိုင်နာလေးက ပေါင်လယ်မှာ ရပ်သွားသည် ။ အတန်းဖက်ကကြည့်လျှင် ဖင်ဖွေးဖွေးဥဥကို သာမြင်ရပြီး ရှေ့ဘက်မှစောက်မွှေးနုနုများ ဖြင့်လှပနေသော အဖုတ်လေးကို မမြင်ရ ။ ဒါကတော့ ကြံရာပါသာ ဖြစ်သောကြောင့် သက်ထားနဲ့ စိမ့်ကို ညှာတာပေးလိုက်သော နောက်ဆုံးလက်ကျန်အရှက်တရားလေး ။ ထို တောင်ပူစာပမာ မို့ခုံးကာအမွှေးစိမ်းများဖြင့် လျှက်နွယ်နေသော အဖုတ်နုနုထွတ်ထွတ်လေးအား ရှေ့မှအသေအချာ မြင်ရသူမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ဘ၀တူသူငယ်ချင်း ၃ယောက်သာ ရှိပါသည် ။ သို့ပေမယ့် ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာ အမွှေးအုံလေးအား မတွေ့ကြရသော်လည်း ဖင်လုံးကျစ်ကာ ဖင်သားပြည့်ပေမယ့် သွယ်လျသောပေါင်တံ ပိုင်ရှင်လေး သက်ထားမှာ ကြီးမားသောအဖုတ်ကြီး ရှိနေပါသည် ။ ဖင်လုံးနှစ်လုံးနှင့် ပေါင်တံနှစ်ချောင်းဆုံရာအရပ် ဖြစ်သော ဖင်ကြားအောက်မှနေလို့ နောက်ဖက်သို့ ပြူထွက်နေတဲ့ အင်္ဂါဇာတ်ကြီးက မကွယ်မဝှက်ပဲ သိသာလွန်းနေသည် ။ ဖောင်းအစ်နေတဲ့ အဖုတ်ဘေးသားကြီးတွေရဲ့ အလယ်မှာ တိတိရိရိ ဓားခုတ်ရာလေး ရှိနေသည် ။ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာပေါက်သော စောက်မွှေးနုလေးများကလဲ ကျိုးတိုးကျဲတဲ။ သနားလို့ဖင်သာဖော်ခိုင်းပေမယ့် ပစ္စည်းကိုက ကြီးလွန်းနေတဲ့ သက်ထားတယောက် စောက်ဖုတ်ပါကြေညာပြီးသား ဖြစ်ပါတော့သည် ။ အတန်းထဲရှိ လူပျိုကျောင်းသားများမှာ အပျိုဖင်နှင့်အပျိုအဖုတ်ကို မြင်ရသောကြောင့် လီးတောင်ကုန်ကြပါသည် ။ ကျောင်းသူများမှာလည်း ရင်တုန်အာခြောက်ကာ ဆရာမများပင်လျှင် ချွေးပျံစပြုလာပါသည်။ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀က ဖင်လှန်ရိုက်သည်ဆိုသည်မှာ မဆန်းပြားသော်လည်း အစွမ်းကုန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစ အပျိုအရွယ် ကျောင်းသူချောကြီးများကို အမှန်တကယ် ပင် အတန်းအလယ် ဖင်ချွတ်၍ တကယ်ဆော်ပြီဆိုသည်မှာ ရှားပါးလှသော အဖြစ် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။ ဖင်ပြောင်ပြောင်ပေါ်ကို လာထိတဲ့ ကြိမ်လုံးရဲ့အတွေ့ကြောင့် သက်ထားတွန့်သွားပါသည် ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရိုက်တာ မဟုတ်သေးပဲ လမ်းကြောင်းချိန်ရုံသာ ဖြစ်ပါသေးတယ် ။ အခုမှတကယ်ရိုက်တာ ။ . . . “ ရွှမ်း ” . . . “ အ ” . . . ဖြူဖွေးဖွေး ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်လေးတွေ တုန်တက်သွားပြီး ကန့်လက်ဖြတ် နီရဲသော အစင်းကြောင်း တခုရဲခနဲ ပေါ်လာသည် ။ သက်ထားနာပေမယ့် အံကြိတ်လို့ ခံသည် ။ အနားမပေးပဲ ချက်ချင်းဆိုသလို နောက်တချက် ။ ဒီတခါတော့ပိုအားစိုက်လို့ လွှဲခနဲရိုက်လိုက်သည်။ . . . “ ရွှမ်း ” . . . “ အာ ဟီးဟီးဟီး ” . . . ဒုတိယမြောက် အရှိုးရာလေး ။ ဒီတခါတော့ သက်ထား ပူခနဲဖြစ်သွားသော တင်ပါးပေါ် ရောင်ရမ်းပြီး လက်ရောက်ကာ သက်သာလိုသက်သာငြား ဖင်သားလေးကိုဆုပ်ကိုင် ပါတော့သည် ။ . . . “ လက်ဖယ်စမ်း ” . . . ကြိမ်လုံးထိပ်ဖြင့် လက်ကိုဘေးသို့ တွန်းရင်း ပြောပေမယ့် လက်ကပြန်ပြန်ရောက်လာသည် ။ ခေါင်းလေးစောင်းလှည့်ကာလည်း ငိုယိုရင်း အသားနားခံသော အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါတယ် ။ . . . “ ချက်ချင်းမဖယ်ရင် နောက်တချက်ထပ်တိုးသွားမယ် ” . . . နောက်တိုးတချက်ကို ထပ်မခံနိုင်သော သက်ထားလက်ကိုဘေးသို့ ချရပါတော့တယ် ။ လက်ရှိအဆော်ခံနေရသောသက်ထားကို ကြည့်ပြီး စိမ့်နှင့် အိအိဖြူတို့လည်း ခုနကထက် ၂ဆတိုးကာ ငိုနေရပြီ ။
သူတို့၂ယောက်လည်း သည်ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်မည်သာ ။ အတန်းရှေ့မှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖင်ပြောင်ကြီးတွေကို အတီးခံရတော့မယ် ။ ရဲနိုင်လည်း မျက်ရည်ဝဲစပြုနေပြီ ။ ဒါပေမယ့် သူက ဂွင်းတိုက်ခံနေရတုန်း တန်းလန်းကြီး လရည်မထွက်သေးခင် လူမိပြီး ဖုတ်ဖက်ခါထလာရတာ ။ အခုလည်း သူငယ်ချင်းမ သက်ထားရဲ့ အောက်ပိုင်းဟောင်းလောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်တွေပြန်လည် ဖောက်ပြန်ချင်လာသည် ။ ပေါင်ကြားထဲမှာ တင်းမားစပြန်ပြုလာသည် ။ သက်ထား ဒူးတုန်ရင်း နောက်ဆုံးကျလာမယ့် အချက်ကိုစောင့်နေသည် ။ . . . “ ရွှမ်း ” . . . “ အ အိအိ အိ ဟီး ” . . . နောက်ဆုံးတချက်အပြီးမှာတော့ သက်ထားနာလွန်းလို့ ခါးပါကော့သွားသည် ။ ပြီးနောက် တင်ပါးပြောင်ပြောင်ကို ကိုင်ရင်း ဆွေ့ဆွေ့ခုန်သည် ။ အားရးပါးရငိုသည် ။ အတန်းထဲက သူတွေအဖို့ တော့အင်မတန်နှာထဖို့ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်း။ ဖင်သား၂ဖက်ကို ဆုပ်နယ်လိုက်တော့ အတန်ငယ် ဖင်ဖြဲလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးတင်မက ဖင်ကြားအရင်းက ညိုတိုတို ဖင်ဝလေးကိုပါ အရှေ့ဖက်နား ထိုင်သူတွေ တွေ့ကြရပါသည် ။ ဒီတခေါက်တော့ ၃ချက်လည်း ပြည့်ပြီမို့ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ဘာမှမပြောပဲ ခဏမျှ စောင့်နေလိုက်သည် ။ . . . “ ညည်းဖင်ညည်း ပြန်ဖုံးပြီးတော့ ခုနကနေရာမှာ ပြန်သွားရပ်နေ လက်ပိုက်ထား ။ ထမီလုံးဝြပန်မ၀တ်နဲ့ ။ ” . . . သက်ထားမျက်ရည်စက်လက်နဲ့ပဲ စက်စပိုင်နာပြန်စွပ်လို့ သူ့ထမီပုံရှိရာဆီ လှမ်းရလေပြီ ။စိမ့် သေးထွက်ကျမတတ် ကြောက်နေပြီ ။ သူ့နာမည်ခေါ်မှာကို အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ကြောက်လန့်ရင်း စောင့်နေရသည် ။ အရိုးဆုံး အအေးဆုံး အကြောက်တတ်ဆုံးသော စိမ့် သည်တောင်ကို ဘယ်လိုကျော်ရပ ။ . . . “ ကဲ မ စိမ့် ပထမတယောက် လုပ်သွားတာ မြင်တယ်မလား ။ အဲဒီ့အတိုင်း ထမီချွတ်ပြီး ဒီနေရာလာခဲ့ ။ ” . . . စိမ့် မျက်ရည်တွေ တွေတွေစီးလို့ ငူငူကြီးရပ်နေဆဲ ။ . . . “ အခု ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပြီးလာရင် နင့်ရှေ့ကသူငယ်ချင်းလို ဆက်စပိုင်နာကျန်မယ် ။ ငါကိုယ်တိုင် ခုနကလို လာဆွဲချွတ်ရရင်တော့ ညည်းအောက်ခံပါ ထမီနဲ့တူတူ ပုံပြီးကျန်ခဲ့မယ်နော် ။ ” . . . “ ငါပြောနေတယ်လေ ဘာလဲ ညည်းအရှေ့ကပစ္စည်းပါ ပေါ်ချင်လို့လား ။ ”. . . နောက်ဆုံး စာလုံးကို အသံမြှင့်ပြောလိုက်တဲ့ အခါကျမှ ကြောင်အမ်းသွေးပျက်နေသော စိမ့် လှုပ်ရှားလာသည်။ . . . “ ဟီးဟီး အင့် အီးဟီးဟီး ဟုတ်ကဲ့ ချယ် ဟီးဟီး ” . . . နောက်တိုး ၁၀ချက်ခန့်ရိုက်မည်ဆိုလျှင်ပင် စိမ့် ဒီလောက်ကြောက်ချင်မှကြောက်မယ် ။ ဆက်စပိုင်ပါ အချွတ်ခံရလို့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးပါပြ ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့ လန့်ဖြန့်ပြီး ထမီစကိုကိုင်သည် ။ ဖုတ်ခနဲနေအောင် ချွတ်ချလိုက်ရတဲ့ ထမီကြောင့်သူလည်း သက်ထား နဲ့ပုံစံတူဖြစ်သွားပါပြီ ။ ရှက်လွန်းလို့လဲ့ တဟီးဟီးနှင့် ငိုသည် ။ စိမ့် ကအသားသိပ်မဖြူလှသော ညိုစိမ့်စိမ့်အသားအရောင်ပိုင်ရှင် ။ ပေါင်လုံးကြီးတွေက လည်း ခပ်တုတ်တုတ်ရယ် ။ ရိုးအေးတဲ့သူပီပီ ၀တ်ထားတဲ့ အောက်ခံကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဖြူရောင် အောက်ခံခပ်ကြီးကြီး ။ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ရှေ့သို့လှမ်းလာသော စိမ့် ကိုကြည့်ပြီး အတန်းထဲက ကောင်မလေးများ သနားကြသည် ။ ကျောင်းသူအများစုမှာ အိအိဖြူနှင့် အရောတ၀င် မရှိလှကာ ရွပိုးထိုးလွန်းသည်ဆိုပြီး အမြတ်ကတ်ကြသော်လည်း စိမ့်နဲ့သက်ထားကိုတော့ ခင်ကြသည် ။ အခုကိစ္စမှာလည်း အိအိဖြူကြောင့် သူတို့၂ယောက် အကြောင်းမဲ့သက်သက် အချောင်ဝင်ခံရသည် ဟုတွေးကာ ဂရုဏာသက်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
စိမ့် ၀တ်ထားတဲ့ ဖြူဖြူကြီးကြီး ဘောင်းဘီကြီးက သက်ထားရဲ့ ဘောင်းဘီပန်းနုရောင်လောက် စွဲဆောင်မှု မကောင်းပေမယ့် တမျိုးတဘာသာ ကြည့်လို့ကောင်းသည်။ တော်တော်များများသော နေရာတွေကို ဖုံးကာထားသော ပုံဟောင်းအောက်ခံဘောင်းဘီသည် ရှေ့ဘက်မှ ခုံးကြွသော ဆီးခုံကြီးကို ကာကွယ်ပေးထားသလို နောက်လှည့်လိုက်သော အခါမှာလည်း ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားရှိလှသော တင်သားစိုင်ကြီးများအား ဖုံးကွယ်ပေးထားပါသည် ။ ဒါပေမယ့် အတော်များများသော ၁၀တန်းအရွယ်အပျိုချောတို့မှာ သည်အသက်သည်အရွယ်ရောက်ကြပြီ ဆိုလျှင်ဖြင့် လူမြင်တာမမြင်တာ အသာထား ကာလာဒီဇိုင်း စုံလင်သော ဆက်စပိုင်နာများကို သူ့ထက်ငါအပြိုင်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ် ။ ထိုရှေးဒီဇိုင်း အောက်ခံဘောင်းဘီကြီးများမှာ ရွှေရင်သိမ်းသစ်အရွယ်တို့သာ ၀တ်လေ့ ရှိသည်ဟုလည်း ယူဆထားပေသည် ။ စိမ့်မှာတော့ ဒီအရွယ် ဒီဖင်ဆိုဒ်ကြီးဖြင့် ခလေးဘောင်းဘီရိုးရိုးကြီး ၀တ်ထား သကဲ့သို့ရှိကာ ကြည့်ရင်းရယ်ချင်စရာ ကောင်းသလိုလို ဖြစ်နေပါသည် ။ အတန်းဘက်ကျောပေးထားပြီဖြစ်တဲ့ စိမ့် ဘယ်လောက်တောင် ရှိုက်ငိုနေသည်မသိ ကြီးထွားတဲ့ တင်ပါးလုံးလုံးကြီးတွေတောင် တုန်တုန်တက်နေသည် ။ . . . “ ကဲ အောက်ကဟာကို နင့်သူငယ်ချင်းလိုပဲလျှော ။ ငါနင်တို့ရဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဟာတွေကို အထည်တိုင်း ငါကိုင်တိုင်ကိုင်ပြီး မချွတ်ချင်ဘူး ။ ” . . . သည်လောက်ရှက်တတ် ကြောက်တတ်တဲ့သူက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဖင်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြောင်နေအောင်ချွတ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်မတွေးမိလေရော့သလား ။ . . . “ ငါပြောနေတယ်လေ ။ ကျွတ် မထုံတက်သေးတွေ ။ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် စိတ်မရှည်တော့ ။ . . . “ ဖုန်း ” . . . . . . “ အီးဟီးဟီးးးးးးးးး ”. . . စိမ့် ဖင်ကြီးပေါ်ကိုကြိမ်လုံးတချက် မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်ခြင်းကြီးကျလာတာမို့ အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ အော်မိသည် ။ လူလည်းရွေ့သွားသည် ။ နာလိုက်သည်မှာ မပြောပါနဲ့။ ဆက်စပိုင်နာ တထပ်ကျန်သေးသည်မို့ ကြိမ်လုံးနဲ့တင်ပါးထိတဲ့ အသံကရွှမ်းခနဲ မထွက် ။ . . . “ ချွတ်မှလား ။ ငါနောက်တချက်ထပ်ရိုက်ရမှာလား ။ ” . . . ဒီတခါမှတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ လက်တွေနဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီဘေး၂ဖက်ကို ကိုင်ရင်း ချွတ်ပါတော့သည်။ တဖြေးဖြေးချင်း တအိအိသာ လျှော့ချရင်း ဖင်သားကြီးတွေ တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံး ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်ကြီးအောက် ပေါင်ရင်းအစလောက်မှာ ရပ်သွားပါတယ် ။ သက်ထားလောက်တော့ ပေါင်လယ်မရောက် ။ ခပ်ညိုညိုဖင်သားစိုင်ကြီးတွေက ပြည့်ဖြိုးဖောင်းအစ်နေသည်။ ပေါင်ရင်းဂွကြားနေတော့ ပြူထွက်ပြူးထွက်လာတာ ဘာမှမတွေ့ရပါ ။ ဖင်ကြီးက အရင်းကောအဖျားပါ ကြီးနေတာကတကြောင်း၊ အောက်ခံဘောင်းဘီကလည်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဖြစ်မနေတာကတကြောင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ။ အချင်းချင်းသာမြင်ရသောရှေ့ဘက်မြင်ကွင်းမှာတော့ ထူထဲသော အမွှေးအုံကြီး ပေါ်နေပါပြီ ။ အမွှေးမဲမဲတွေ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးစွာနဲ့ ထူထဲနေတဲ့ စောက်မွှေးထုကြီး ။ ဒီလို တောအုပ်ကြီးနဲ့ယှဉ်တော့ စောနက သက်ထားရဲ့ဟာလေးက မြက်ခင်းသာသာ ဖြစ်သွားသည် ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ဒီဆက်စပိုင်နာကိုတော့ ပေါင်လယ်ရောက်အောင် ထပ်မချွတ်ခိုင်းတော့ပါ ။ ဒီ၂ယောက်ကိုက ဖင်ချွတ်ရိုက်တယ် ဆိုရုံလောက်ဆို ထိုက်တန်ပြီလို့လဲ ယူဆထားပါတယ် ။ ခုနက မသက်ထားကတော့ ပစ္စည်းကိုက မဟားဒယားကြီးနေတော့ သူမတတ်နိုင် ။ တတန်းလုံးတွေ့လေပြီ ။ အခုဒီတယောက်ကိုလည်း ဖင်ဖော်ပြီး ဆော်ရရုံဆို လုံလောက်ပါပြီ ။ မိန်းမအင်္ဂါပေါ်မပေါ်က ထည့်စဉ်းစားရဖို့မလို ။ အရှက်လွန်ပြီး ခေါင်းထဲမှာ ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ စိမ့် သူ့ဖင်ပေါ်ကို ကြိမ်လုံးလာထိမှ သတိပြန်ဝင်လာသည် ။ ဒါက ချိန်ရုံရှိသေးတာ ။ . . . “ ရွှမ်း ” . . . . . . “ အီး ဟီးးးးး ဟိ ဟင့်ဟင့် ဟင့် ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ” . . . ကြိမ်လုံးရဲ့ ထိချက်၊ ကိုယ်လုံးကြီးခါသွားတာနဲ့အတူ ဖင်သားကြီးတွေက လှိုင်းကြီးတွေပမာ တုန်တက်သွားပါတယ် ။ စိမ့်ရဲ့ အော်သံက သက်ထားတုန်းကထက်ကို သိသိသာသာကြီး ပိုကျယ်နေသည် ။ ခလေးကြီးတယောက်ငိုသလိုကို အာပြဲကြီးနဲ့ အော်ငိုနေတာပါ ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် လက်နောက်တခါ လွှဲလိုက်ပါပြီ ။ ရွှမ်း ခနဲအသံကော၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးကျယ်လာတဲ့ အော်သံက တခန်းလုံးကို ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ် ။
ဖင်ကြီးတွေသာမက ကိုယ်လုံးကြီးပါ ရိမ်းခါသွားပါတယ် ။ တလုံးတခဲ တင်ပါးကြီးမှာတော့ အရှိုးရာက ၂ခုဖြစ်သွားပါပြီ ။ စိမ့်အဖို့ အရှက်ထက် အနာက ပိုပြီးသည်းစပြုလာပါတယ် ။ တင်ပါးတပြင်လုံး ကျိမ်းစပ်လွန်းလို့ မီးနဲ့တိုက်သလားတောင် ထင်နေရပါတယ် ။ နုလွန်းတဲ့ စိမ့်တယောက် နောက်တချက်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်က သိတာမှမဟုတ်တာ ။ သူသိတာက နောက်တချက် ကျန်သေးတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ . . . “ ရွှမ်း ” . . . အားရပါးရကြီးလွှဲပြီးတော့ ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်ကြီးကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ်ကြီး ထိသွားတဲ့ နောက်ဆုံးတချက် ။ . . . “ အားးးးးးးးးးးး ” . . . အာခေါင်ခြစ်သံနဲ့ အော်ငိုလိုက်ပြီး ရှေ့ကို၂လှမ်းလောက်ရွေ့သွားပါတယ် ။ ပိုက်ထားတဲ့လက်တွေကလည်း တင်ပါးပေါ်ရောက်ပြီး သက်သာလိုသက်သာညား ဆုပ်နယ်မိနေပြီ ။ အရှက်ကိုပင် မငဲ့နိုင်တော့ ခါးကြီးကော့ကာ အားရပါးရ ကိုပွတ်သပ်နေပါတယ် ။ ဘယ်သူမှမသိလိုက်တာကတော့ နောက်ဆုံးတချက်မှာ စိမ့် ပေါင်ဂွကြားက ကြွက်သားတွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်မှု ခေတ္တလွတ်သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းခဏ ရပ်စောင့်ပြီးမှ . . . “ ညည်းဖင်ပြန်ဖုံးလို့ရပြီ ။ ပြီးရင်နေရာပြန်သွားတော့ ။ ” . . . ကျောင်းသူကလေး စိမ့် ငိုရင်းပြုရင်းနှင့်ပင် အောက်ခံဘောင်းဘီကို နေရာတကျဖြစ်အောင် ဆွဲတင်ပါတယ် ။ အပုံလိုက်ဖြစ်နေသော ထမီနေရာမှာရပ်ရင်း အတန်းဘက် မျက်နှာပြန်လှည့်လိုက်တဲ့ အခါတွင်မှ တခန်းလုံးဟာ ခနဲဖြစ်သွားကြပါသည် ။ ဖောင်းမို့သောဆီးခုံကြီး ရဲ့အောက်ဖက်တည့်တည့်မှာ အကွက်လိုက်ကြီး ။ ဘောင်းဘီကအဖြူမို့ စိုသွားတဲ့အခါ တိုးယိုပေါက်သာသာဖြစ်ပြီး စောက်မွှေးအုံကြီးကို မြင်နေရသည် ။ စိမ့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ နာလွန်းလို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ထွက်ကျသွားချင်းဖြစ်သည် ။ တဗြန်းဗြန်းနေအောင် ပေါက်ချမိတာ မဟုတ်မိပေမယ့် တစ်စက်နှစ်စက် မကသာမို့ စက်စပိုင်နာမှာတော့ သိသိသာသာ စိုရွှဲသွားသည် ။ ကွဲလိုက်တဲ့ အရှက် ။ အပျိုထွားလေး စိမ့် လူ၆၀ကျော်ရှေ့ ဖင်ချွတ်ရရုံမျှမက သေးထွက်သွားတာပါ မှတ်တမ်းတင်လေပြီ ။ ပြီးနောက် အိအိဖြူ အလှည့်၊ အားလုံးကမှင်သေသေပြီး၊ ရာဂမျက်လုံးများဖြင့် ဝိုင်းကြည့်ကျသည်။ အိအိဖြူရဲ့ လှုပ်အိလှုပ်အိဖြစ်နေတဲ့ အိုးထွားထွားကြီးတွေနဲ့ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ကြောက်လန့်ရင်း စောင့်နေရသည် ။ ” ဒီနေရာလာခဲ့ ။ ” . . .ငါပြောနေတယ်လေ အိအိဖြူလည်း ခုနကထက် ငိုနေရပြီ ။ အတန်းရှေ့မှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖင်ပြောင်ကြီးတွေကို အတီးခံရတော့မယ် ။ “ ဒီအရှေ့ထွက်ခဲ့ ” . . . ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် ပြောလည်းပြော လက်ကလည်း လက်မောင်းကိုကိုင်ရင်း ကျောက်သင်ပုန်းကို မှီပြီးရပ်နေသော နေရာမှ ရှေ့ဘက်၃လှမ်းလောက်အကွာ စင်၏အလည်တည့်တည့် အရှေ့အနောက်လွတ်သော နေရာကို ဆွဲခေါ်လာပါသည်။ ဆက်စပိုင်ပါ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ အောက်ပိုင်းအားလုံးပြ ရမဲ့ ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့ ထမီစကိုကိုင်ထားသည် ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ဖုတ်ခနဲနေအောင် ချွတ်ချလိုက်ရတဲ့ ထမီကြောင့်…တခန်းလုံးဟာ ခနဲဖြစ်သွားကြပါသည် ။ အတန်းဘက် မျက်နှာလည့်ထားတာမို့လန့်ဖြန့် ရှက်ကြောက်မှုတွေကြောင့် မိန်းမအင်္ဂါပေါ်ကစောက်မွှေးအုံကြီးကို လက်ဖြင့်ကာထားကာ တွန့်တွန့်လူးနေတော့သည်။ နောက်မှ ဖင်လုံးပြောင်ပြောင်ကြီးကို လက်ဖြင့်ကာထားသည်။ ထမီကတော့ ကွင်းလုံလေးပုံနေပါပြီ ။ “လက်ကိုဖယ်လိုက် ” . . . ဟုဆိုပြီး အတန်းသားများကို ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ အိအိဖြူ မငြင်းဆန် နိုင်ပါ။ အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ့တော့ဖြစ်နေပြီး။ အောက်ခံဘောင်းဘီမရှိ အားလုံးရဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ စောက်မွှေးနုနုများ ဖြင့်လှပနေသော အဖုတ်လေးကို ပြသထားရသည်။ လက်ဖယ်လိုက်သော်အခါ အတန်းထဲရှိ လူပျိုကျောင်းသားများမှာ အိအိဖြူရဲ့ လျှိုဝှက်ထားသော မို့ခုံးကာအမွှေးနုများဖြင့် လှပသည်အဖုတ်ကို မြင်ရသောကြောင့် ပျော်မြူက လီးရှည်ထွက်လာပြီး အစွမ်းကုန်တောင်ကုန်ကြပါသည် ။ ကျောင်းသူများမှာလည်း ရင်တုန်စပြုလာပါသည်။ အရင်က ဖင်မလှန်ပဲ့ ရိုက်သည်ဆိုသည်မှာ မဆန်းပြားသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးပြီး အပျို ကျောင်းသူချောကို အမှန်တကယ် ပင် ဤကဲ့သို့ မြင်တွေ့ ရသော အဖြစ် ဖြစ်ပါသည် ။ အိအိဖြူရောင်ရှက်ပြီး လက်ရောက်ကာ အဖုတ်လေးကို ပြန်ကာပါတော့သည် ။. . . “ လက်ဖယ်စမ်း ” . . . ကြိမ်လုံးထိပ်ဖြင့် လက်ကိုဘေးသို့ တွန်းရင်း လက်ကိုဖယ်လိုက်ပါသည် ။ ခေါင်းလေးစောင်းလှည့်ကာ မျက်နှာကိုငုံထားပါတော့သည် ။ “လက်ပိုက်ထားစမ်း ” . . . အာဏာသံပြင်းစွာပြောသော အသံကြောင့် လက်၂ဖက် ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ယှက်ထားလျက်သားဖြစ်သွားပါသည် ။ “ရဲနိုင်လာခဲ့စမ်း” . . .ပြောရင်းဆိုရင်း ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် လက်ထဲကကြိမ်လုံးကြီးကို လေထဲမှာ ဝှီးခနဲနေအောင်လွှဲရင် ဟန်ရေး ပြလိုက်ပါတယ် ပြီးလျှင် အချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ…. ရဲနိုင်ပုဆိုးချွတ်စမ်း ဟု ကျယ်လောင်စွာပြောသော အသံကြောင့်…။ လိင်တံကြီးကို လက်ဖြင့် ကာလျှက်ရဲနိုင်ပုဆိုးချွတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုနောက် အိအိဖြူအား အသားမနာချင်ရင်၊ ရဲနိုင်ရဲ့ လီးအားစုပ်မလားဟု မေးလိုက်ရ.. တတန်းလုံး “ဟာ” ကနဲဖြစ်သွားပါသည်။ အိအိဖြူ အသားနားမှကို ကြောက်သည်ကတစ်မျိုး၊ ကိုယ်တိုင်က စုတ်ချင်သော်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရှက်ရှက်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်လိုက်ပါသည်။ “ညည်းဒီအတိုင်းစုတ်လို့ မရဘူး” . . .ပြောရင်းဆိုရင်း.. အိအိဖြူရဲ့ အပေါ်ဝတ်ကို ချွတ်စေပြီး၊ ဘရာကိုပါအမြန်ချွတ်ချလိုက်ပါတော့သည်။ အိအိဖြူရဲ့ အပျိုနို့အုံ နူးနူးညံ့ညံ့လုံးလုံးလေးမှ ပြောရက်စရာ မရှိအောင်လှပနေပါတော့သည်။ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားသောအိအိဖြူရဲ့ ရှေ့ပိုင်းအလှမှတင်၊ ကျောင်းသားများအားလုံးထိပ်စိုနေကြပါတော့သည်။ လက်နှဖက်ကို ဘေးချခိုင်းက ရှက်လွန်း၍ တုန်နေသော အိအိဖြူကို ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့် က … “ညည်း အခုမှ ဘာရှက်နေတာလဲဟုဆိုကာ နောက်ဖင်ကို ကြိမ်ဖြင့် တစ်ချက်တို့လိုက်ပါသည်။ အိအိဖြူဖင်တွန့်သွားပြီး၊ မျက်နှာမထားတတ်သောကြောင့် ဘေးတိုက်အနေအထားသို့ လှည့်က ထိုမှ အတန်းကိုကျော်ပေးမိလိုက်ပါသည်။့ နောက်ကျောအလှ ပေါင်သားဖွေးဖွေးတို့နှင့် ဖြူဖွေးသော ဖင်သားစိုင်ကြီးတွေကိုက မဟားဒယားပြသမိလျှက်ဖြစ်နေပြီး သူမတတ်နိုင် ။ ရှေ့ရောနောက်ပါ တတန်းလုံးတွေ့လေပြီ ။ “ညည်းဒူတောက် ဘေးလှည့်စမ်း … ရဲနိုင်ဒီအတိုင်းလာခဲ့” ရဲနိုင်လီးကြီးနှင့် အိအိဖြူမျက်နှာနှင့် ကပ်သွားပါတော့သည်။ အိအိဖြူ ရဲနိုင်လီးကြီးကို ကြည့်နေရာမှာ … ရဲနိုင်ဖင်ကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖက်ပြီး၊ ဥကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်က… ပါးစပ်ဖြင့် ရဲနိုင်၏ တုတ်တံကြီးကို အားရပါးရ စုပ်ပါးတော့သည်။ တစ်မိနစ်ခန့် ဖြင့် ရဲနိုင်မှာ မထိန်းနိုင်ပဲ သုတ်ရေများ ပန်းထွက်လာပါတော့သည်။ ကျောင်းသူများအားလုံး ရှက်ရှက်ဖြင့် အို့ဟု အသံများထွက်က မျက်နှာလွဲလိုက်ကျပါတော့သည်။ အိအိဖြူ တစ်ယောက်ပေးကျန်သွား၍ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပဲ မတ်တတ်ရပ်ကာ၊ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်ကို ကြည့်လိုက်ပါတော့သည်။ ထိုနောက် ရှေ့ဆုံးတန်းမှ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို ခေါ်လိုက်ပြီး၊ ရေစို တစ်ရှုဖြင့် အိအိဖြူ၏ ပေကျံနေသော နို့အုံ နှစ်လုံးကို တစ်ဖက်စီ သုတ်ခိုင်းပါတော့သည်။
အိအိဖြူ ရှက်လွန်း၍ မနေတတ်တော့ပါ။ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်တစ်ယောက် အိအိဖြူ၏ အ၀တ်အစားများကိုသိမ်းထားလိုက်ပြီး ညည်းဒီအတိုင်း အချိန်ကုန်ကျောင်းလွှတ်တဲ့ အထိနေရမယ်ဟုပြောကာ၊ သူ၏ထိုင်ခုံပေါ်တွင်သွားရပ်ခိုင်းပါတော့သည်။ ဖြူဖွေးလှသော ကိုယ်လုံးတီးလေးက အားလုံးရဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ အကြည့်ခံနေရဆဲ….. ရဲနိုင့်အတူ သက်ထားနဲ့စိမ့်တို့မှာ လည်း ရပ်နေရာမှာ လုံချည်ပြန်ဝတ်ရန် လုံချည်ကောက်လိုက်သော်အခါ၊ ညည်းတို့ကိုဘယ်သူက ၀တ်ခိုင်းတာလဲဟုဆိုကာ၊ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်တစ်ယောက် ဒေါ်သထွက်ပြီး၊ သက်ထားနဲ့စိမ့်တိုကို ဘောင်းဘီပါ ပြန်ချွတ်ခိုင်းပါတော့သည်။ ကျောင်းလွှတ်တဲ့ အထိနေရမယ်ဟုပြောကာ၊ သူတို့၏ထိုင်ခုံပေါ်တွင်သွားရပ်ခိုင်းပါတော့သည်။ ၃ယောက်စလုံး အောက်ပိုင်း ဗလာဖြင့် တဆတ်ဆတ်တုန့်ရင်း ရပ်နေရတော့သည် ။ အပျိုအရွယ် ကျောင်းသူချောကြီးများကို အတန်းအလယ်တွင် အောက်ပိုင်း ဗလာဖြင့် နေခိုင်းသည်မှ မြင်ရသူအပေါင်း စိတ်ကြည်နူး ရင်ခုန်ရသော အဖြစ်ပင် ဖြစ်ပါသည် ။ အိအိဖြူကတော လုံးဝကိုယ်တုံးလုံး ၊ သက်ထားနဲ့စိမ့်တိုမှာ အောက်ပိုင်း ဖင်တုံးလုံးဖြင့် လူအများရှေ့ စောက်ဖုတ်ပါပြနေရသည်မို့ ရှက်လွန်လွန်းလို့ လက်တကာတာဖြင့်တဟင့်ဟင့်နှင့်၊ အိအိဖြူ မျက်နှာလေးလည်း လုံးဝ ရဲရဲတွတ်နေပါသည် အတန်းထဲမှာ အရှက်လုံးလုံးကွဲရတော့သည်။